တက်သစ်စဘဝတုန်းက သူ့ကိုမျက်မုန်းကျိုးခဲ့တဲ့ Producer ကို Yoo Jae Suk ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ခဲ့သလဲ? | News Bar Myanmar
တက်သစ်စဘဝတုန်းက သူ့ကိုမျက်မုန်းကျိုးခဲ့တဲ့ Producer ကို Yoo Jae Suk ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ခဲ့သလဲ?
Yoo Jae Suk တစ်ယောက် host အဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ You Quiz on the Block ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က အပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ဂျူနီယာဟာသသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Im Lala နဲ့ Son Min Soo တို့ဟာ ဒီလောကမှာ ရပ်တည်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကို ရင်ဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ဟာစုံတွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် Producer တွေဟာ မအောင်မြင်ခင်တုန်းက သူတို့ကိုလမ်းခွဲဖို့ဖိနှိပ်ပြီး တွန်းအားပေးခဲ့ကြောင်းတွေကို ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့အခါမှာ Yoo Jae Suk ကလဲ သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေပြုပြီး အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေအများကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။
အခုချိန်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့အသဲကျော် Nation’s MC တစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမယ့် တစ်ချိန်က Yoo Jae Suk မှာလဲ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်။ သု့အသက် ၂၀ အရွယ်ကို ပြန်မသွားချင်လောက်အောင်ကို ပင်ပန်းခဲ့ရပြီး အဲ့ဒီအချိန်က သူ့ကိုဘာလုပ်လုပ်မျက်မုန်းကျိုးနေတယ်ဆိုတာ သိသာတဲ့ Producer တစ်ယောက်လဲ ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။
အဲ့ဒီ Producer ကိုဘယ်လိုတုန့်ပြန်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ Son Min Soo ရဲ့မေးခွန်းကို ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကတော့ တကယ်ကို Nation’s MC ပီသပါပေတယ်လို့ အားလုံးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ‘အဲ့လိုလူတွေကို တုန့်ပြန်ဖို့နည်းလမ်းကတော့ စတားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားတာပါပဲ’ တဲ့။
အောင်မြင်ဖို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့ ဖိနှိပ်ချင်သူတွေ တိုက်ခိုက်ချင်သူတွေ ရှိစမြဲပါ။ Yoo Jae Suk ကတော့ အဲ့လိုလူတွေကို အညိုးတကြီးတုန့်ပြန်ဖို့မကြံပဲ က်ိုယ့်လမ်းကိုသာရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆက်လျှောက်ခဲ့တာမို့ ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေ ဆွတ်ခူးခဲ့နိုင်တာ အတုယူစရာပါပဲ။
Next မိုးရာသီရဲ့ လွမ်းမောဖွယ်အငွေ့အသက်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကောင်းများ »
Previous « ပထမဆုံးထုတ်လွှင်တဲ့အပတ်မှာ တော်သင့်ရုံ Rating နဲ့ကျေနပ်နေရတဲ့ Was it love? နဲ့ She Knows Everything